Homekhadadka xadiidka xawaaraha sare
Waxaan ku jirnaa farxadda iyo farxadda inaan gaarno Ciid kale oo Ciid ah halkaas oo saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo wadaagistu ay gaareen heerkoodii ugu sarreeyay dalkan aan ku wada noolaan jirnay kun sano. Mar labaad, wadaaga rootida miisaska wadnaha, [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu kordhin doonaa Koonfur-bari
Marxaladda koowaad ee tareenka xawaaraha sare ee Konya-Karaman-Mersin, kaas oo ku xirnaan doona Bartamaha Aasiya ilaa gobolka Mediterranean, ayaa la qorsheynayaa in uu bilawdo imtixaanka Konya-Karaman dhammaadka sanadka. Safarka Waqtiga safarka u dhaxeeya laba magaalo 40 daqiiqado degdeg ah Dhismuhu si dhakhso ah ayuu u socdaa [More ...]
İsa ApaydınFarriinta Sanadka Cusub
Rakaabka Qaaliga ah, Asxaabta qaaliga ah, Waxaan uga tagnay sannad kale oo guul buuxda leh shaqaalaheenna u adeegaya habeen iyo maalin, xagaaga iyo jiilaalka, oo leh kalgacayl iyo xamaasad. Bariga iyo Galbeedka waxay dhisi doonaan buundo nabadeed iyo walaaltinimo, adduunka [More ...]
TCDD, oo dardar gelineysa dadaallada dib-u-habeynta isla markaana ujeedkeedu yahay in la kordhiyo awoodda rakaabka, ayaa magacyada maxalliga ah siin doonta tareennada ku jira qaab-dhismeedkooda. Süleyman Karaman, Agaasimaha Guud ee Tareenka Waddooyinka (TCDD), wuxuu yiri [More ...]